Abalingani be-AfricArXiv ne-COS ukusekela ucwaningo lwe-pan-Afrika - i-AfricArXiv
Ababhali: UNicole Pfeiffer, uClaire Riss, no nethimba le-KiaArXiv
NgoJuni 2018, i-Centre for Open Science (i-COS) kanye nenkundla ye-Pan-African cross-disciplinary Open Access platform I-AfricArXiv wethule i- ngokubambisana ukuhlinzeka ngemisebenzi yangaphambi kokuphrinta emphakathini wezazi wase-Afrika. Manje, ubuholi be-COS kanye ne-AfricArXiv bafuna ukuqhubekisela phambili izifundo ngokubambisana okuvulelekile kwemibono nobufakazi, emhlabeni wonke ngenkuthalo kubandakanya nomphakathi wezazi wase-Afrika.
Okuningi kwalokhu kushintshana njengamanje kwenzeka ngokushicilelwa kwama-athikili ephephabhuku kulandela ukubuyekezwa kontanga, okunezela izinyanga noma ngisho neminyaka ekusakazweni kokutholakele. Ngokwabelana ngemibhalo yesandla ngaphambi kokubuyekezwa okusemthethweni kontanga, inqubo kanye nokuxhumana kokutholakele kuyasheshiswa futhi kwenziwa kufinyeleleke kubo bonke. Amaphephabhuku amaningi akhokhisa imali ekhokhelwayo ukuthola ama-athikili ashicilelwe, kepha ngokwabelana ngemibhalo yesandla ngaphambi nangemuva kokushicilelwa mahhala kumcwaningi, ukufinyelela okuvulelekile kwazo zonke izazi kuyatholakala.
Ngaphandle kokushicilelwa ngokusobala kwemifundaze ngokusebenzisa iziqalo, i-COS ne-AfricArXiv bazama ukukhuthaza ukwamukelwa kwemikhuba yocwaningo evulekile, eqinile, futhi ekhiqizwayo. Ngalokhu kubambisana, umphakathi ocwaningayo wase-Afrika ovela kulo lonke izwekazi ungazibandakanya emicimbini yokuqeqesha nasemaphrojekthi wokusebenzisana usebenzisa zonke izici I-OSF inikezela, futhi ithole ulwazi ngemikhuba emihle, izinqubomgomo, kanye nezikhuthazo zokukhuthaza nokwandisa imikhuba evulekile yezifundiswa e-Afrika yonkana.
Ngasekuqaleni kwale nyanga, i-AfricArXiv ifingqiwe impumelelo nemephu yomgwaqo iminyaka elandelayo engu-1-3 ezayo. Ungasekela futhi wakhe maqondana nokusimama kwayo nge opencollective.com/africarxiv.
Inhloso yokubambisana okuqhubekayo ukuhlinzeka ngosizo lwengqalasizinda yedijithali kubafundi base-Afrika, abasebenza ngemitapo yolwazi kanye neminye iMfundo ePhakeme (i-HE) kanye ne-Research & Innovation (R&I) abathintekayo ukwenza ukuhamba komsebenzi kusebenze isikhathi esiningi nezindleko futhi kuhlinzekwe ukuqeqeshwa, izingqungquthela, nama-workshops azungeze i-Open Science kanjalo ne-Research Data Management (RDM) nemibhalo yocwaningo.
Ngokuvumelana ne umgwaqo womgwaqo we-AfricArXiv, womabili ama-COS ne-AfricArXiv avumile:
Sungula iphothifoliyo yobambiswano futhi usungule izinsizakalo okwabelwana ngazo ezenzelwe kanye nezenzelwe ababambiqhaza bezocwaningo base-Afrika kanye nababambe iqhaza kwezemfundo ephakeme.
Ukufinyelela okuhlanganisiwe kubabambiqhaza be-HE HE ukuze bazise ngezinsizakalo ze-COS kanye ne-AfricArXiv nokuthi lokhu kungakusiza kanjani ukugeleza kokusebenza kwabafundi base-Afrika kanye nokutholakala komsebenzi wabo
Ukuzibandakanya nezinhlangano zocwaningo zase-Afrika kanye nezinhlangano ezibambisene nabo ezithintekayo ukuthola izikhala emibhalweni yokuhamba komsebenzi wocwaningo futhi kuphakanyiswe namathuba e-OSF okugcwalisa lezo zikhala
Ukubhala iziphakamiso ngokubambisana kanye nokuqongelela imali online ukuqinisekisa ukusimama kwezezimali komzamo ohlangene
Hlela ukuqeqeshwa okubonakalayo okuhlangene kanye nama-workshops ku-Open Access kanye ne-Integrity Research ngokusebenzisa imikhuba ye-Open Science
Sibonga ukwethulwa kokuqala ne-COS ukuthi sikhona njengesevisi kwizifundiswa zase-Afrika futhi sijabule ngokuqhubeka kobambiswano lwethu olusebenzela amathuba kanye nokufezeka okuzovela kulokhu,
Kusho ithimba le-AfricArXiv.
Ukubambisana nomphakathi we-AfricArXiv ukusekela izifundiswa zase-Afrika ezivela kulo lonke izwekazi emisebenzini yocwaningo eqinile futhi esobala kuzokwenza ukuthi kube nokwabelana ngolwazi okusheshayo. I-COS ikulangazelele ukusebenzisana ukwakha amandla nokukhulisa ukwamukelwa kwemikhuba yesayensi evulekile nethimba le-AfricArXiv,
kusho uMqondisi woMkhiqizo we-COS uNici Pfeiffer.
Ngokubambisana okufana nalokhu okusungulwe ne-COS, sithemba ukusungula indawo yokugcina ezimele, esebenza kahle, esimeme futhi esesezingeni eliphansi esebenza njengesizinda esisebenzisanayo seminikelo yabaphenyi base-Afrika, kanye nabo bonke ososayensi abasebenza ngokomongo wase-Afrika, ngenhloso ukwandisa ukutholakala kocwaningo lwase-Afrika.
kusho iMenenja yoMphakathi ye-AfricArXiv, uJohanssen Obanda
Mayelana nesikhungo seSayensi evulekile
Ukushintshana okuvulelekile kwemibono kusheshisa inqubekela phambili yesayensi yokuxazulula izinkinga eziphikelela kakhulu zesintu. Izinselelo zezifo, ubumpofu, ezemfundo, ubulungiswa kwezenhlalo, kanye nemvelo ziphuthuma kakhulu ukuzixazulula njengokuchitha isikhathi ezifundweni ezingenakho ukuqina, imiphumela engakaze yabelwane ngayo, kanye nokutholakele okungazalwanga kabusha. I-COS isekela ucwaningo emhlabeni wonke ngokunikeza amathuluzi nokuqeqeshwa, nangokuxhumanisa ushintsho lwamasiko kumikhuba, izikhuthazi, nezinqubomgomo kuwo wonke umphakathi ocwaningayo ukwenza ucwaningo luqhubekele phambili, lusheshe futhi lube ngcono.
I-AfricArXiv yindawo yomlando ekhokhelwa ngumphakathi yezokuxhumana ngocwaningo lwase-Afrika futhi iyindlela efinyeleleka ngokusobala yokwabelana ngeminikelo yocwaningo kuyo yonke imikhakha. Sinikezela ngeplatifomu engenzi nzuzo yokulayisha amaphepha asebenzayo, amaprinta, imibhalo yesandla eyamukelekayo (okushicilelwe ngemuva), izethulo, namasethi wedatha ngamapulatifomu kazakwethu. I-AfricArXiv izinikele ekucwaningeni nasekusebenzisaneni phakathi kososayensi base-Afrika, ukuthuthukisa ukubonakala kokukhishwa kocwaningo lwase-Afrika kanye nokwandisa ukusebenzisana emhlabeni jikelele.
Mayelana noHlaka lweSayensi evulekile
I-AfricArXiv isingathwe ku-Open-source Open Science Framework (OSF) kanye neminye imisebenzi yangaphambi kokuphrinta (bona https://osf.io/preprints/). I-OSF isiza abacwaningi ukuklama, ukusebenzisana, nokuphatha ukuhamba komsebenzi wabo wokucwaninga, idatha kanye nezinto zokugcina izinto, futhi inikezela ngezihlonzi eziphikelelayo, ikakhulukazi ama-DOI (Isihlonzi Sedijithali Object). I-OSF ihlinzeka ngokugcina kungobo yomlando okuphephe kakhulu, okungafuneki
imisebenzi yokulondolozwa ngokuqiniseka kwemiphumela yocwaningo. I-COS isebenzise ipulatifomu ukusiza imiphakathi ecwaningayo emikhakheni eminingi futhi amazwe athola ucwaningo olusha futhi athole impendulo ngemiphumela yawo ngaphambi kokushicilelwa okuthuthukisa ubulukhuni. Ababhali beprintprint bayakhuthazwa ukuthi bahlanganise izixhumanisi zezinto zabo zokucwaninga ezingaphansi, idatha, ikhodi nokubhaliswa kwangaphambilini ukukhulisa ukusebenzela obala nokwethembana.
Ukuhlinzeka ngezinsizakalo eziningi kwingqalasizinda okwabiwe kuyonga izindleko Izindleko zokusebenzisa insizakalo eyodwa yangaphambi kokuzimela zizoba nzima emiphakathini eminingi. Ngenqalasizinda ejwayelekile, izinsizakalo zepreprint zabelana ngezindleko eziphelele ezinciphisa umthwalo womuntu ngamunye nokukhuthaza ukusimama.
Ungazisekela izinsizakalo zepreprint ze-AfricArXiv ngqo ku https://opencollective.com/africarxiv
Xhumana nesikhungo se-Open Science ne-OSF
Imibuzo: UClaire Riss claire@cos.io
Imibuzo: UJohanssen Obanda info@africarxiv.org
Categories:	Ukwakhiwa kwamakhonoUkubambisanaVula UkufinyelelaVula iSayensiUkubambisana isimemezeloIsanduleloEzokuxhumana Kwesayensi